Itoobiyaan Wata Taangiyo iyo Gaadiidka Dagaalka oo Luuq Soo Galay | KEYDMEDIA ONLINE
Itoobiyaan Wata Taangiyo iyo Gaadiidka Dagaalka oo Luuq Soo Galay
Kismaayo (Keydmedia) - Sida ay sheegayaan Wararka aynu ka helayno degmada Luuq ee gobbolka Gedo Cutubyo Ciidamo Itoobiyaan oo aad u qalabeysan islamarkaana wata Taangiyo iyo Gaadiidka Dagaalka ayaa goordhow soo gaaray degmada Luuq, iyagoona Ciidamadaasi la sheegay inay dur badiiba u ruqaansadeen dhanka Gobbolada Bay iyo Bokool.
Qod goob jooge ah oo Degmada Luuq ku suggan ayaa Keydmedia khadka Taleefoonka ugu sheegay in tirada ciidamadani ay gaarayan ilaa dhowr Guuto oo aad u qalabeysan, isagoona sheegay in cutubyo kamid ah Ciidamadaasi ay u sii gudbeen dhanka Gobbolada Bay iyo Bokool.
Ciidamadaan ayaa la sheegay inay wataan ilaa 20 Taangida dagalka ah iyo Baabuur kale oo kuwa dagaalka ah .
Ciidamadaan oo ah kuwo aad u fara badan ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ee sanadahaan gudaha u soo gala dalka Soomaaliya, waxana ay Ciidamadani ay yihiin kuwa dhan kasta ka dhamaystirin.
Ciidamadaan Luuq soo gaaray ayaa qaarkood waxaa ay fariisimo ay ka samaysteen qeybo kamid ah degmada Luuq, Sarakiisha ciidamada TFG-da ee degmada Luuq oo aan la xariirnay ayaa ka gaabsaday inay faah faahin ka bixiyaan Ciidamada Itoobiyaanka ah ee dalka Soo galay.
Ra'isal wasaaraha Itoobiya Males ayaa maalmo ka hor sheegay in Ciidamadiisu aysan marnaba Soomaaliya ka bixi doonin ilamaa ay ka gaaran danta ay Soomaaliya u soo galeen.
Wixii warar ah oo ku soo kordha dib ayaan idinka soo tabin doonaa.